प्रचार अभियान बनाउनु - फरक के हो?
प्रचार अभियान बनाइयो
भाषा र अर्थको दुरुपयोग
जब अधिकांश व्यक्ति प्रचार को बारे मा सोचते हो, उनि उनिहरुलाई पोस्टर र गीतहरु को बारे मा या सरकार को सहायता संग वार्टिमम को समयमा सोच्न को लागी गर्छन, तर यस तथ्य को सत्य हो कि प्रचार को धेरै व्यापक आवेदन छ। यो न केवल एक सरकार द्वारा प्रयास को लागी को लागि मान्छे को निश्चित विश्वास या व्यवहार को लागी प्राप्त गर्न को संदर्भित गर्दछ, तर यो निगमों को चीजहरु लाई खरीद गर्न को लागी को तरिका मा पनि लागू गर्न सकिन्छ।
प्रचार के हो? स्पष्ट रूपमा बोले, हामी "propaganda" को रूपमा कुनै पनि व्यवस्थित प्रयास विचार गर्न को लागी एक विचार को सत्य, एक उत्पाद को मूल्य, वा एक मनोवृत्ति को उचितता को बारे मा धेरै संख्या मनाउन को लागी। प्रचार प्रचारको रूप हो जुन केवल सूचित गर्न खोज्छ; बरु, यो दुबै दिशात्मक छ (किनभने यो प्रायः मानिसहरु लाई केहि फैशन मा कार्य गर्न खोज्छ) र भावनात्मक (किनकि यो विशिष्ट स्थितियों को लागि केहि भावुक प्रतिक्रियाहरु को शर्त) खोज्छ।
जब सरकारले संगठित र जानबूझाउने तरिकामा जनतालाई विश्वास गर्न पुग्यो भने मिडियाले तिनीहरूको सुरक्षाको लागि युद्ध आवश्यक छ, यो प्रचार हो। जब एक निगमले संगठित र जानबूझाउने तरिकामा मीडिया प्रयोग गर्दछ कि मानिसलाई सोच्नका लागि नयाँ प्रकारको रेजर पुरानो भन्दा राम्रो छ, यो प्रचार हो। अन्ततः, यदि एक निजी समूहले संगठित र जानबूझाउने तरिकामा मिडिया प्रयोग गर्दछ भने मान्छेहरूले आप्रवासीहरूको लागि नकारात्मक मनोवृत्ति अपनाउन, यो प्रचार पनि छ।
सबैले पछि के प्रचार र तर्क बीचको भिन्नता के हो भनेर सोध्न सक्छ - सबै पछि, एक प्रस्ताव को सत्य स्थापित गर्न को लागी एक तर्क छैन र यसैले, कम से कम स्पष्ट रूप देखि, मान्छे को प्रस्ताव को सत्य स्वीकार गर्न को लागि? यहाँ मुख्य अंतर यो हो कि जब एक तर्क एक प्रस्ताव को सच्चाई स्थापित गर्न को लागी डिज़ाइन गरिएको छ, प्रचार को सत्य को बावजूद एक-पक्षीय तरिका मा बिना विचार को गोद लेने को लागि डिज़ाइन गरिएको थियो।
कृपया ध्यान राख्नुहोस्, यद्यपि, केवल "propaganda" को रूपमा केहि लेबलिंगले सत्य, मूल्य, वा बेच्ने "बेचेको" को सहितापनको बारेमा केहि भन्न सक्दैन। माथिको उदाहरण प्रयोग गरी, सम्भवतः यो सत्य हो कि युद्ध आवश्यक छ, नयाँ रेजर अझ राम्रो छ, र मानिसहरूसँग आप्रवासीहरूको लागि सकारात्मक मनोवृत्ति छैन। त्यहाँ "प्रचार" को बारेमा कुनै कुरा छैन जुन यो झूटा वा भ्रामक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक छ। राम्रो तरिकाले प्रबर्धन उपकरणको प्रयोगको उदाहरण हुन सक्छ कि नशेको ड्राइभिङ्ग को लागी हानिकारक कार्यक्रम वा व्यक्तिहरुलाई मतदान गर्न दर्ता गर्न विश्वस्त हुन सकिन्छ।
त्यसैले त्यहाँ किन सामान्य धारणा छ कि प्रचार खराब छ? किनकि प्रचार यसको सत्यता बिना विचारको अनुमोदन फैलाउने सन्दर्भमा चिन्ता छ, मानिसहरू यो स्केप्टिक रुपमा हेर्नको लागी धेरै सम्भावना छन्। यस तथ्यको बावजुद अधिकांश मानिसहरू महत्वपूर्ण सोचमा ठूलो काम गर्दैनन्, उनीहरूले अझै पनि सच्चाइको हेरविचार गर्छन् र सोच्न सक्छन् कि अरूलाई पनि। यदि तिनीहरू विश्वास गर्छन् कि केही संगठनले सत्यको सम्बन्ध बिना एजेन्डा धक्का गरिरहेको छ, तिनीहरू नकारात्मक प्रतिक्रिया हुन जाँदैछन्।
यसबाहेक, हामी ध्यानमा राख्नुपर्छ कि भ्रामक उद्देश्यहरू धेरै प्रशोधनका लागि प्रचार प्रयोग गरिन्छ।
यो गिरफ्तारी को लागी प्रचार को लागि धेरै सामान्य छ, विरूपण मा व्यस्त रहयो, र धेरै अन्य त्रुटियों देखि भरी हो कि प्रचार को कल्पना गर्न को लागि यो धेरै मुश्किल छ कि यो तरीका छैन । तथ्याङ्कको रूपमा, प्रचार सन्देश अक्सर राम्रो काम गर्दछ जब हामी सन्देश सावधानीको कारणले गर्दा असफल भएन। आजको संसारमा हामी सबै यति धेरै सन्देशहरू र धेरै जानकारीमा बमोजिम छौं जुन मानसिक शर्टकट्टहरू लिन को लागी कुनै पनि तरिकामा प्रशोधन गर्न प्रलोभनमा छ। यद्यपि मानवीय शर्टकटहरू जुन तर्ककारी तर्कहरू बाईपासले वास्तवमा ती हुन्, जसले प्रचारप्रसारित सन्देशहरूलाई हाम्रो आविष्कार नगरी हाम्रो विश्वास र मनोभावलाई प्रभाव पार्न अनुमति दिन्छ।
तैपनि, किनकि जडान स्वतन्त्र हुन्छ, हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं कि लेबलिंग केहि कुरा प्रचारको लागी यसैले निष्कर्षको बारेमा केहि बताउँछ। यसबाहेक, किनकि "प्रचार" शब्द एक भावुक रूपमा लोड गरिएको लेबल हो, प्रचारको कुनै पनि आलोचनाले लेबलको साथ सुरु गर्नै पर्छ।
बरु, यो एक आलोचक प्रदान गर्नु राम्रो छ र त्यस पछि, तर्कहरू रद्द गरिसकेपछि वा ध्वष्कार भएपछि, यो प्रचारको फारमको रूपमा योग्य हुनुपर्दछ।
अल्बर्ट आइंस्टीन मा विज्ञान, भगवान, र धर्म मा
म्याट्रिक्स: धर्म र बौद्ध
Hypotheses, सिद्धांतहरु र तथ्यहरु बीच भेदभाव
माथोलोजी आह पच, मृत्यु को ईश्वर मायान धर्म मा
पत्राचार सत्य को
विवाह र धर्म: संस्कार वा नागरिक अधिकार?
ईश्वरीय आमाबाबुले छोराछोरीलाई के गर्नुपर्छ?
कट्टरपंथी अस्थिरता के हो?
शेक्सपियरको खोपले के भयो?
रंगीन फूलहरू कसरी बनाउने
टम किट: पीजीए टूरको 'श्री संगतता '
बराक ओबामा हास्य राउन्डअप
त्यहाँ तौल टगलहरू छन् कि तपाईंको आँखाको वरिपरि छल्काहरू छोड्दैनन्?
कतिपय मेरो पियानो चाहिन्छ?
आतंकवादको बारेमा कुरानलाई के भन्छ?
के हो राजमार्ग वा शहर मिल्स मेरो कारको लागि राम्रो छ?
रोमन शाहील मिति
के सिखको लागि क्रिसमस एक राम्रो विचार छ?
'सानो ड्रमर केटा' Chords
वर्जीनिया राज्य विश्वविद्यालय प्रवेश
मेजरहरूमा ज्याक निकलोउस
कसरी राष्ट्रपति र उपाध्यक्ष छनौट छन्
Misquote: बेंजामिन फ्रैंकलिन मा बीयर
कस्तो समुद्री सागरको अवस्थाको लागि अभ्यास गर्ने
स्टोर र पसलहरूको नाम
Shungite के छ?
के नोबल ग्याँसहरूले रासायनिक यौगिकहरू बनाउँछन्?
अनलाइन मित्रता साइटहरू महिलाहरू नयाँ मित्रहरू बनाउन मद्दत गर्छन्
सात बहनों कलेज - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
मसीह कलेज प्रवेश
किन "फरेनहाइट 451" सँधै भयानक हुनेछ
फ्रांसीसी शब्द वाउभियर जान्नुहोस्
अनुरोध को आवश्यकता को रूप मा अनुरोध गर्न को लागि आवश्यक छ